ओली प्रवृतिसँग आज लड्ने कि भोली ! | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more ओली प्रवृतिसँग आज लड्ने कि भोली !
मंसिर १४ गते, २०७७ - १८:३४
म एक आम नागरिक भएर त यत्ती कुरा बुझ्न गाह्रो छैन भने प्रचण्ड-माधव नेपालहरुले यि कुरा बुझेका छन कि छैनन् ? ओली भनेको एउटा कागजको बाघ मात्रै हो ।
पार्टीको बैठक बसेर ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट फिर्ता बोलाउनु पर्छ । सरकारको असफलता र भ्रस्टाचार अझ जनताले बुझ्ने गरी अंकडा सहित् बाहिर ल्याउनु पर्छ । बहुमतको निर्णय नमाने कारवाही गर्न सक्नु पर्छ ।
पार्टी एकता ओलीको सत्तामा पुग्ने भर्र्याङ् मात्र हो । जुन बिभिन्न घटनाक्रमले पुस्टि गरिसकेको छ । यो एकता प्रती उनलाई न कुनै सम्मान छ न माया । सत्तामा पुग्नु थियो पुग्यो, अब कुनै आवश्यक छैन । सत्तामै संकट आयो भने बरु काङ्रेससँग मिल्छु तिमीहरुलाई देखाइदिन्छु । तिमीहरुका यस्ता बहुमत सहुमत मेरालागि तुच्छ हो । तिमीहरुलाई मान्दा पनि मान्दिन गन्दा पनि गन्दिन भनेर प्रस्टसँग ओलीले देखाइसकेका पनि छन । राजनीतिक भाषा, राजनीतिक प्रशिक्षकको गुन, सालीनता, भद्रता शिस्टता जस्ता कुराको उनमा बिउ पनि छैन । खाली उखान टुक्का छोडेर गलल लोक हसाउने, जतिबेला जे बोलेर ‘हिरो’ बनिन्छ त्यही बोल्दिने, आफु राम्रो भएर होइन अर्काको बद्ख्वाइ गरेर फेमस् बन्ने – हो यत्ती हो ओलीले जानेको । ओली न राष्ट्रवादी हो न हल्ला गरिए जस्तो बिकास प्रेमी । यि त सब मौसमी राग हुन । होइन भने आज डाँडा डाँडामा रेल, खोला खोलामा पानी जहाज अनी भान्सा भान्सामा ग्यासको पाइप हुन्थ्यो । नसकिने कुरो बोलिदैन थियो । कुलमानहरु इनाम पाउँथे गोकुल बास्कोटाहरु जेल जान्थे ।
मंसिर १४ गते, २०७७ - १८:३४ मा प्रकाशित